Roobka Deyrta oo ka curtay Muqdisho iyo jidadka oo xiran | KEYDMEDIA ONLINE
Roobabkii Deyrta oo inta badan dhulka Soomaalida ka curtay ayaa si xoog leh wuxuu uga da'ay magaalada Muqdisho, isagoo sababay in ay xirmaan qaar kamida waddooyinka, halka kuwa kalena ay ku burbureen.
MUQDISHO - Soomaaliya: Waxaa magaalada muqdisho ka da'ay roobkii weynaa ee xilliga deyrta loo yaqaan, galinkii dambe ee shalay ayuu si xoog leh uga da'ay roobkan dhammaan 17 -ka degmo ee gobolka Benaadir, waxa uuna biyo dhigay dhammaan waddooyinka waa weyn ee bartamaha magaalada mara, qaar kamida waddooyinkaasi waxay u xirmeen biyaha oo ay gawaaridii xitaa mari waayeen.
Maamulka Gobolka Benaadir oo booqday qeybo kamida xaafadaha uu sida aadka u saameeyay ayaa waxay isku dayeen in ay furaan biyahana ka dhuuqaan waddooyinka, balse kuma guuleysan arrintaas roobka oo aad u badnaa awgeed, inta badan xilli roobaadka waxaa xirma waddooyinka halbowlaha u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka gobolka benaadir, dhammaan laamiyada dib loo dayactiray ee ku burburay xilligii dagaallada sokeeye malahan biyo mareeno!
Jidadka waa weyn sida jidka warshadaha, kan 30-ka, 21 Oktoobar, Jidka Ceelqalow iyo kuwo kale ayey biyihii xireen, dhammaan gaadiidka ayaa ka wareegsanaya halka ay biyuhu fadhiyaan oo ay boholo ka sameysmeen. waddooyinka qaar sida waddada isku xirta Aargada lambar afar iyo dugsiga 21-ka Oktoobar ayaa la arkayay kuwaasoo ay boyad biyo uga dhuuqayeen bartamaha waddada, hayeeshee xaddiga biyaha ay aad uga badnaayeen, waxaa la arkayay gawaari biyaha xowligooda darteed mari waayay waddada iyo waddooyin kale oo qul-qulka biyaha ay cabsi galinayaan gawaarida iyo dadka halkaasi isticmaala.